mushaTURKEYCentral Anatolia Region68 AksarayAksaray Ulukışla Railway Line yasvika padanho rekupedzisira
09 / 01 / 2020 68 Aksaray, Central Anatolia Region, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, TURKEY
Aksaray ulukisla njanji yakasvika kune yekupedzisira pfungwa
Head munhevedzano Ankara ichibviswa Aksaray COMMODITY Exchange kuita nevanhu zvinokosha Hamid Ozkok, Aksaray Commerce uye Industry Chamber Sachigaro Cuneyt kupfuta, Aksaray COMMODITY Exchange Council President Nurettin Yapılc ari Aksaray Chamber of Commerce President Assembly Fatih Tekin wokutanga Turkey Chambers uye chinokosha Exchanges Association ( TOBB) Mutungamiri M. Rifat Hisarcıklıoğlu vakashanya.
Social zvivako TOBB nhume Aksaray horo musangano maiva ne Turkey Union of Chambers uye chinokosha Exchanges (TOBB) President akaonga purezidhendi kugutsikana pamwe kushanya M. Rifat Hisarcıklıoğlu.
Turkey Union of Chambers uye chinokosha Exchanges (TOBB) President Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Trade Exchange muna January uye akakumbirwa ne co-vakuru achaita kuti chirongwa Aksaray Chamber of Commerce uye Industry. Mutungamiri Hisarcıklıoğlu akavimbisa kutora chikamu muchirongwa. Kushanya kwacho kwakazopera nechirangaridzo chakatorwa gare gare.
Kuunganidzwa Aksaray Railway
Kutevera kusanganisa Aksaray Railway mu 2018 Investment Chirongwa, Hamit Özkök, Sachigaro weAksaray Commodity Exchange uye Cüneyt Göktaş, Sachigaro weAksaray Chamber of Commerce neindasitiri, Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Mutevedzeri Wengozi Mukuru weNyika Railways Ministry of Railway Regulation Mutevedzeri Mukuru maneja Bilal Tırnakçı akasangana na.
Mutevedzeri WaneManeja Vakuru Fikret Şinasi Kazancıoğlu naBilal Tırnakçı vakapa ruzivo rwehunyanzvi nezve Aksaray - Ulukışla njanji.
Nhumwa iyi yakaita chirevo chakabatana nezvekukosha kwechinyorwa uye magariro eAksaray.Chokutanga pane zvese, mutevedzeri weAl Party, Cengiz Aydoğdu, mumwe wetsika dzakasimudzwa naAksaray, anoita nhamburiko huru kune njanji, anoshandisa bureaucracy nemazvo uye anoona kuti njanji inosvika pano. kana kukutenda zvikuru. Iri iguta rekare rinobatanidza kuchamhembe kumaodzanyemba uye kumabvazuva kusvika kumadokero pakati peAnatolia. Yazova nzvimbo inokwezva yevanotengesa mari nekuda kwenzvimbo yayo munzira yeSilk Road, nzvimbo yenzvimbo uye kuve mudunhu rechitanhatu muna Aksaray's kukurudzira system. Makambani mazhinji epasi rese anoita zvigadzirwa muguta redu. Nekudaro, inotambura nekufambisa uye zvinhu. Aksaray Ulukışla njanji neyekutanga kutumira kunze kwenyika zvinhu zvakagadzirwa muAksaray yedu kuMersin Port pamutengo unokwezva kwazvo wehupfumi uye mamiriro ezvinhu ichave mukana wakanaka kune vezvinabhizinesi vanoisa mari muAksaray. Aksaray nokudaro ichave guta rinokwezva kwevanodyara mari nepfungwa uye nehunyanzvi. ”
Mutevedzeri WeManeja Mukuru weTCDD uye Nhengo yeBhodhi yeVatungamiriri Ministry of Transport and Infrastructure Deputy Deputy Manager weRailway Regulation Bilal Tırnakçı akataura kuti chirongwa cheUlukışla Aksaray Railway Railway chakapera muna 2018 uye kuti chasvika padanho re tendero.
Iyo nailer Aksaray Konya uye Antalya mutsetse chirongwa ichave yapera muna June wa2020 yakapa ruzivo nyoro. (AqsarayhaberS)
Nzira ye 2 uye 9 viaduct ichavakwa paKırşehir-Aksaray-Ulukışla Railway Project line
Aksaray kusvika kuKırşehir-Ulukışla motokari
Kırşehir - Aksaray - Ulukışla Railway Project Project kugadzirira Proje
Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Musangano weChipiri weKubatanidzwa Kwevanhu Vakaitwa
Kırşehir-aksaray-ulukışla Musangano weChiredhiyo weVanhu Vanobatana neMusangano
Tender Kuziviswa: Aksaray-Ulukışla Railway Survey Project Engineering uye Kubvunza…
Aksaray - Ulukışla Railway Project Survey, chirongwa, engineering uye kubvunza ...
Aksaray - Ulukışla Railway Kuongorora ndeimwe yemakambani akakunda iyo sarudzo-isati yasvika yepurojeke nyoro ...
Aksaray - Ulukışla Railway Survey yemapurisa emapurisa emapurisa akazarurwa
Aksaray - Ulukışla Railway Project Survey, chirongwa uye mainjiniya inin
Aksaray - Ulukışla Railway Project Yakazadzirwa kuongororwa, hurongwa uye ingano yekutengesa
Aksaray - Ulukışla Railway Project Winner yeiyo nyoro, chirongwa uye engineering nyoro ales